GSMA na-eme ụbọchị nke MWC 2019 | Akụkọ akụrụngwa
GSMA na-eme ụbọchị nke MWC 2019
Ọ dị ịtụnanya na anyị ejirila ọkara nke afọ a 2018 mana ọ bụrụ na enwere ihe anyị enweghị ike ịkwụsị, oge eruola. N’ọnwa nke ọnwa Febụwarị nke afọ a, emere ka otu n’ime ihe omume telephony ekwentị mkpanaaka ugbu a, Mobile World Congress, na Barcelona. N'ime ihe omume a, a na-ewetara ọtụtụ akwụkwọ akụkọ nke ndị nrụpụta dị iche iche anyị nwere gburugburu ụwa, na n'afọ na-esote, a na-atụ anya na ihe omume a ga-aga n'ihu na-agbaji ndekọ nke ọbịbịa nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na teknụzụ ụbọchị ndị ọchịchị ga-amalite na ngwụcha nke MWC adịla na tebụl.
Maka ugbu a, anyị nwere ike ịhụ na afọ a ụbọchị dị nso na afọ gara aga na mmemme niile ga - eme site na February 25 ruo 28, 2019. GSMA chọrọ ka ị debe ụbọchị a maka ihe omume ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ma ya mere na-eme ya ọkwa mgbe ọnwa ole na ole ga-amalite.
Dị ka afọ ọ bụla, nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-aga ihe omume ahụ ga-eme ihe ngosi ha na ngwụsị izu tupu mmalite nke MWC, yabụ na Satọde 24 na Sunday 25 February 2019 anyị ga-enwe Huawei, Samsung, Lenovo, LG na ụdị ndị ọzọ buru ibu na-eweta ngwaọrụ ọhụrụ ha. Ha niile ga-adị na MWC ụbọchị na ebe La Fira.
Ndị MWC Ọ karịrị nnọọ smartphones na enwere ike ịhụ ma gosipụta ya site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi akwadoro na-aga Mobile World Congress kwa afọ. NkechiA na-atụ anya na nke a ga-aga n'ihu na Barcelona ruo 2023, ma ihe niile a ga-adabere na ndị ọchịchị nke mba ahụ na ndị na-ahazi ihe omume ahụ, na ụkpụrụ ọ dị ka ọ ga-abụrịrị na anyị ga-enwe Mobile maka oge na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » GSMA na-eme ụbọchị nke MWC 2019
Laghachi ụlọ akwụkwọ na-abịa Amazon
Igwe meteor kụrụ ọdụ ụgbọ elu ụwa